Ungalwenza njani uPhicotho lwe-SEO olupheleleyo | Martech Zone
Kule veki iphelileyo, umntu endisebenza naye ebekhankanye ukuba uneklayenti ebonakala injalo banjwe kwizinga eliphezulu kwaye wayefuna i Uphicotho lwe-SEO yesiza ukubona ukuba akukho micimbi ikhona na.
Kule minyaka idlulileyo, iinjini zokukhangela ziguqukile kangangokuba izixhobo zophicotho-zincwadi zakudala azisancedi nganto. Ngapha koko, ibiyiminyaka esi-8 okoko ndacaphukisa iiarhente zokukhangela kunye nabacebisi ngokuthi I-SEO ibifile. Ngelixa inqaku lalicofiwe, ndema ngakwisiqalo. Iinjini zokukhangela ziinjini zokuziphatha ngokwenyani, hayi nje abakhasayo abaskena iibits kunye nee-byte zesiza sakho.
Ukubonakala kweinjini yokukhangela kuxhomekeke kwimilinganiselo emine:
Umxholo wakho -Ucwangcise kakuhle, ubonise, kwaye uphucule umxholo wakho kwaye Lungiselela inkqubo yolawulo lomxholo wakho ukukhangela iinjini ukukhasa nokuchonga ukuba ithini indawo yakho.
Igunya lakho - ukuba indawo yakho okanye ishishini lakho likhuthazwa njani kwezinye iisayithi ezifanelekileyo apho iinjini zokukhangela ziyakwazi ukwetyisa kwaye ziqonde ukuthembeka kunye negunya lakho.
Abantu abakhuphisana nabo -Uza kubeka kwinqanaba nje kukhuphiswano lwakho olukuvumela, ukuze uqonde ukuba zeziphi izinto ezenziwa ngabakhuphisana nabo abagcina bekwindawo ephezulu kubaluleke kakhulu kwimpumelelo yakho.
Iindwendwe zakho Iziphumo zeinjini yokukhangela ubukhulu becala zilungelelaniswe nokuziphatha kwendwendwe lakho. Ke, kuya kufuneka ubonelele ngesicwangciso esinyanzelayo nesibandakanya wonke umntu ukuze kwabelwane ngaso, anyuselwe, kunye neendwendwe ukuba ziqhubeke nokubonakaliswa nawe kwiziphumo zazo. Oku kunokuxhomekeka kwindawo ekuyo, isixhobo, ixesha lonyaka, njl. Njl. Ukulungiselela indlela yokuziphatha kwabantu kuya kukhokelela ekubonakaleni ngakumbi kokukhangela.
Njengoko ubona, oku kuthetha ukuba kuya kufuneka wenze itoni yophando yophicotho-zincwadi… ukusuka kwikhowudi yokusebenzela kunye nokusebenza kuphando lokhuphiswano, kuhlalutyo oluhamba phambili, ukurekhoda nokuphonononga indlela yokuziphatha kwabatyeleli kwiphepha.
Xa uninzi lweengcali zophando zenza uphicotho lwe-SEO, kunqabile ukuba zibandakanye zonke ezi zinto kuphicotho-zincwadi ngokubanzi. Uninzi luthetha nje ngokwenza uphicotho olusisiseko lobuchwephesha be-SEO kwimiba yesayithi.
Uphicotho-zincwadi luNgoko, i-SEO ayisiyiyo
Xa ndichaza i-SEO kumthengi, ndihlala ndibelana ngokufana kwenqanawa ewela ulwandle. Ngelixa inqanawe inokuba ikwimeko yokusebenza egqibeleleyo kwaye ikhombe kwicala elifanelekileyo, ingxaki kukuba zikhona ezinye iinqanawa ezinokuthi zikhawuleze kwaye zibengcono… kwaye amaza kunye nomoya wealgorithms unokuzithanda.
Uphicotho lwe-SEO luthatha umfanekiso okhawulezayo ukukubonisa ukuba uqhuba njani, wenza njani ngokuchasene nabantu abakhuphisana nabo, kunye nendlela oqhuba ngayo ngokubhekisele kwi-algorithms yeinjini yokukhangela. Ukuze uphicotho lusebenze, kufuneka uqhubeke ngokuqhubekayo kwaye ujonge ukusebenza kwe-domain yakho… ungacingi nje ukuba kusetelwe kwaye ulibale indlela.
SE Uphicotho lweWebhusayithi
Esinye isixhobo ngaphandle phaya esiya kwenza oku kukujonga ngokukhawuleza SE Isixhobo soPhicotho lweZikhundla. Isixhobo esiphicothiweyo esinokucwangciswa kwaye sikunike iingxelo ezicwangcisiweyo zokukunceda wenze ngcono kunye nokuphucula ukubonakala kweinjini yokukhangela kunye nenqanaba.
The SE Uphicotho lweNqanaba kuvavanya zonke iiparameter zenqanaba lokukhangela kwiinjini yokukhangela:
Iimpazamo kwezobuchwephesha -Qiniseka ukuba iithegi zakho ze-canonical kunye ne-hreflang zimiselwe ngokuchanekileyo, jonga ukuhambisa kwakhona useto, kwaye ufumane iphepha eliphindiweyo. Ngaphezulu, hlalutya amaphepha aneekhowudi zenqanaba le-3xx, 4xx, kunye ne-5xx, kunye nezo zivaliwe ziirobhothi.txt okanye ziphawulwe ngethegi ye-noindex
Iimpawu zeMeta kunye neentloko -Fumana amaphepha aneemeta ezingekhoyo okanye eziphindiweyo. Ukuqwalaselwa kwesihloko esifanelekileyo kunye neenkcukacha zethegi ekugqibeleni kuyakuvumela ukuba uchonge iithegi ezinde kakhulu okanye ezimfutshane kakhulu.
Isantya sokulayisha iwebhusayithi -Jonga ngokukhawuleza ukuba iwebhusayithi ilayisha njani kwizixhobo eziphathwayo nakwizikhangeli ze-Intanethi kwaye, ukuba ithatha ixesha elide ukufumana iingcebiso kuGoogle malunga nendlela yokuyisebenzisa.
Uhlalutyo lomfanekiso -Skena yonke imifanekiso kwiwebhusayithi kwaye ubone ukuba ikhona na into engekhoyo kwithegi ye-alt okanye unempazamo engama-404. Kwaye, khangela ukuba nayiphi na imifanekiso mikhulu kakhulu kwaye, ngenxa yoko, yehlisa isantya sokulayisha isiza.
Amakhonkco angaphakathi -Fumanisa ukuba zingaphi izixhumanisi zangaphakathi ezikhoyo kwiwebhusayithi, imithombo yazo kunye namaphepha okuya kuyo, nokuba ingaba ayiqulathanga nto. Ukwazi ukuba amakhonkco angaphakathi asasazeka njani kwisiza sonke kuya kukunceda ukuba uwuphucule.
Isixhobo asihambi nje ngokurhubuluza kwindawo yakho, sikwabandakanya zombini i-analytics kunye ne-Google Search console yedatha kuphicotho-zincwadi ngokubanzi ukukunika ingxelo ecacileyo yendawo yakho, ukuba ikwindawo enjani kumagama aphambili onqwenela ukuwabeka kuwo, ngokunjalo ngendlela oqhuba ngayo ngokuchasene nabakhuphisana nabo.
SE Usetyenziso iqonga libanzi kwaye livumela abanini bewebhusayithi ukuba balawule yonke imiba yokukhasa kunye neWhitelabel iingxelo ukuba ungumcebisi we-SEO okanye iarhente:
Iingxelo ezicwangcisiweyo ezizenzekelayo kunye nokuqwalaselwa kwakhona kukuvumela ukuba ugcine iwebhusayithi yakho iphantsi koqwalaselo rhoqo.
I-SE Rankings's bot inokungayikhathaleli imigaqo evela kwiirobhothi.txt, landela useto lwe-URL, okanye ulandele nje imigaqo yakho yesiqhelo.
Yenza ingxelo yakho yophicotho lwewebhusayithi: yongeza ilogo, bhala izimvo, kwaye uyenze lakho kangangoko kunokwenzeka.
Uyakwazi ukuchaza into ekufuneka iphathwe njengempazamo.
Qalisa kuvavanyo lweentsuku ezi-14 zasimahla zoSetyenziso lwe-SE
Khuphela isampulu yengxelo yePDF:
U-Alexa wabele le infographic, Isikhokelo soPhicotho-zincwadi lwe-SEO sabaQalayo, ekhomba kwimicimbi engama-21 kwiindidi ezili-10 - zonke onokuzifumana kwisixhobo soPhicotho lweNqanaba le-SEO:
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa eyam SE Usetyenziso ikhonkco lokudibana kweli nqaku.
tags: Uphicotho lwe Alexa AlexaAmazonamazon alexauphicotho-zincwadi olunokhuphiswanoUhlalutyo lwamagama aphambilisixhobo segama elingundoqoUkuphicothwa kwephepha lokufikaUhlalutyo lwesantya sephephaUphicotho lwepdfUphicotho lweinjini yokukhangelauphengululo nosebenziso lweinjini yokukhangelauphicotho zincwadiuphicotho lwendawo
iinkonzo zokuphicothwa kwewebhusayithi
Jun 28, 2015 ngo-8:22 AM
Izixhobo zesayithi zolwazi olukhulu. Oku kuyimpumelelo ngakumbi kwabaqalayo.